DRAG QUEEN EXTRAORDINAIRE, SHANGELA LAQUIFA WADLEY, UNC ကျောင်းသားများအတွက်နိဂုံးချုပ်ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့တောက်ပသောအလင်းရောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက် - နှုန်းထားများ
Drag Queen Extraordinaire, Shangela Laquifa Wadley, UNC ကျောင်းသားများအတွက်နိဂုံးချုပ်ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့တောက်ပသောအလင်းရောင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်
ထိုကဲ့သို့သောမုန်းတီးမှုများနှင့်ပါတီခွဲခြင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေပုံရသောကမ္ဘာတွင်အထူးသဖြင့် HB2 ၏အကျိုးဆက်များပြီးနောက်မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတွင်ရှန်ဂဲလ်ကဲ့သို့သောမိဖုရားများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကဤလောက၌အမှန်တကယ်ရှိသောပျော်ရွှင်မှုကိုသတိရစေသည်။ ရာပေါင်းများစွာသော UNC ကျောင်းသားများ၊ အများစုသည်သူတို့၏ပထမဆုံးဆွဲဆောင်မှုအတွေ့အကြုံအတွက် Shangela နှင့်တွေ့ရန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစုရုံးခဲ့ကြသည်!
ဓာတ်ပုံ - Danny Bowen, Sydney Hale၊ Robert Rhinehart, Collin Williams နှင့် Meredith Ammons (Myself)
အဘို့အ adderall ရောင်းဖို့ဘယ်လောက်
UNC ကျောင်းသားတစ်ဒါဇင်ကို Shangela ၏ကျောင်းသားဖက်ရှင်ပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
Shangela သည်လူစုထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးသူမ၏အံ့သြဖွယ်အကန့်အသတ်စွမ်းရည်ဖြင့်သူမ၏အနုပညာအကများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Shangela မဟာခန်းမသို့ရောက်သောအခါမည်သူမျှထိုင်။ မရခဲ့ပါ။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှကလပ်ပြပွဲထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ တောင်ပိုင်းမက်သဒစ်တက္ကသိုလ်မှစီးပွားရေးဒီဂရီဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် Shangela သည်ပရိသတ်ရှိကျောင်းသားများကိုအကြံဥာဏ်ပေးခဲ့သည်။ Shangela ကသင်၌ဖြစ်ပျက်လာမည့်အရာအားသင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏ဥာဏ်ပညာကိုမျှဝေခဲ့သည်။ သို့သော် 'သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာမှာသင်လုပ်ဆောင်မည့်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီ။ ရှေ့သို့ချီတက်သွားမည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ '
အစစ်အမှန်သို့မဟုတ် script ကိုပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်မှာလက်ထပ်သည်
Charlotte Grush (ညာ) နဲ့ငါအနည်းဆုံးပြောစိတ်လှုပ်ရှားမိကြသည်!
ပြပွဲအပြီးတွင် Shangela သည်ဖက်ရှင်ပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ရမည့်သူမ၏အကြီးဆုံးပရိသတ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် selfies၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံခဲ့သည်။
Shangela ဟာငါတွေ့ဖူးသမျှယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရအကောင်းဆုံး၊ အချိုဆုံး၊ အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနဲ့လှပသော (အတွင်းနှင့်အပြင်) နှစ် ဦး ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်စီကိုစကားပြောဖို့အချိန်ပေးပြီးအစောပိုင်းကငါတို့နာမည်တွေတောင်မှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီညမှာ Greensboro မှာ ၂ နာရီထက်နည်းတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူမတစ်ယောက်ချင်းစီကိုအထူးခံစားမှုရှိစေခဲ့တယ်။ Shangela ၏ကျေးဇူးကြောင့် UNC ကျောင်းဝင်းဘယ်တော့မျှမေ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ! ဟယ်လို!